२ बर्ष अघि छोरीसँग बिहेपछि सासुसँगै फिदा अनि लिभिङ टुगेदरमै भयाे यसरी ह त्या… हेर्नुस् – PathivaraOnline
Home > अपराध > २ बर्ष अघि छोरीसँग बिहेपछि सासुसँगै फिदा अनि लिभिङ टुगेदरमै भयाे यसरी ह त्या… हेर्नुस्
२ बर्ष अघि छोरीसँग बिहेपछि सासुसँगै फिदा अनि लिभिङ टुगेदरमै भयाे यसरी ह त्या… हेर्नुस्
admin January 21, 2020 अपराध, जीवनशैली, समाज	0
माघ ०७, भोपाल । भारतको मध्य प्रदेशको राजधानी भोपालमा एक व्यक्तिले आफ्नो लिभइन पार्टनरको घाँ टी रे टे र ह त्या गरेका छन्। यी दुबै बीच सासु र ज्वाइको नाता पर्ने बताइएको छ। ह त्याको सुचना पाउनासाथ घटनास्थल पुगेको प्रहरीले श वलाई कब्जामा लिएर पोस्टमार्टमका लागि पठाएको छ। घटना भारतको भोपालस्थित अशोका गार्डन क्षेत्रको हो। यस्तो अचम्मको सुनियो कि केहि बर्ष अगाडि छोरी दिएकि सासु नै ज्वाइसाग सँग सुत्थिइन ।
प्रमिलाले धोका दिएर गएपछि बाजा बजाएर अर्को बिहे गर्ने सन्तोषको घोषणा (भिडियो सहित)
हिन्दूधर्ममा मंगलबार किन विशेष छ ? धन कमाउन यसो गर्नुहाेस्, ॐ गणेशाय नमः लेखेर शेयर गर्नुहाेस्
घरेलु वि’षाक्त म’दिरा सेवनका कारण जनकपुरमा दर्जनभन्दा बढीको मृ’ त्यु, गाउँ नै डुबे शोकमा!
प्रकाश सपुतकाे बदलाले लियो ट्रेण्डिङमै बदला! #ट्रेण्डिङ २ मा (भिडियो हेर्नुस्)
गुहा’र माग्दै रबि लामिछानेलाई भेट्न पुगे आफ्नो कलेजो का’टेर १५ दिनको छोरालाई बचाउने बाबु – हेर्नुहोस भिडियो